Ikekwe anyị kwesịrị ịmalite ya mere. Mgbe ụfọdụ, anyị na ndị ahịa na-akparịta ụka na mgbasa ozi mmekọrịta, ha na-asị na ha anọghị na mgbasa ozi mmekọrịta ka ha ghara ichegbu onwe ha banyere ya. Ọfọn… nke ahụ bụ nwute n'ihi na agbanyeghị na akara gị anaghị esonye na mkparịta ụka mmekọrịta, ọ pụtaghị na ndị ahịa gị na ndị ahịa ị chọrọ esonyeghị.
A gaje ịbụ onye ahịa nke ahụ zuru oke maka ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ gị dị na ụfọdụ nzukọ mmekọrịta ọha na eze na-arịọ maka enyemaka na nkwenye maka onye na-ere ahịa. Ebe ọ bụ na ịnọghị na mkparịta ụka ahụ, onye asọmpi ọzọ na-abanye, na-enyere ha aka, na ikuku na-enweta nkwekọrịta ahụ.